V1.【Uhambo lweshishini, uhlobo lweholide】Izothutho ezilula phambi kwe-CHEONG-JU Intercity-Express Bus Station, usapho olunolonwabo oluninzi kufutshane - I-Airbnb
V1.【Uhambo lweshishini, uhlobo lweholide】Izothutho ezilula phambi kwe-CHEONG-JU Intercity-Express Bus Station, usapho olunolonwabo oluninzi kufutshane
Heungdeok-gu, Cheongju, North Chungcheong Province, South Korea
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJiyoung
★ Kutshintshwe ibhedi entsha 🥰
★Itheminali yimizuzu emi-5 yokuhamba/indawo yokupaka yasimahla/isakhiwo esitsha
1. Sisakhiwo esitsha esinesitayile esiphambi kweSiteshi sebhasi ye-Intercity (iSiteshi sebhasi ye-Express) e-Cheongju, Chungcheongbuk-do. Ibonelela ngebhedi ecocekileyo nepholileyo, kunye nokuhamba kulungele, ngoko unokuya naphi na apho ufuna ngokulula kwaye ngokukhawuleza!
(Isikhululo se-KTX Osong, iSixeko saseSejong, iSikhululo saseCheongju, iSikhululo seenqwelomoya saseCheongju, iYunivesithi yaseCheongnam, iNqaba yaseSangdangsanseong, iSeongan-gil, iMarike yaseYukgeori, iSuamgol, iDaecheong Dam, njl.njl.)
2. Ufikelelo olugqwesileyo kwi-Osong ekufutshane, isiXeko saseSejong, i-Oksan, kunye ne-Cheongju Industrial Complexes.
3. Indawo yorhwebo ejikelezileyo inkulu, kwaye zonke izixhobo eziyimfuneko zasekhaya zixhotyiswe ngokupheleleyo.
1. Indawo yokulala ecocekileyo netofotofo ibonelelwe kwisakhiwo sale mihla nesitsha ngaphaya kweSitishi seBhasi.
2. Indawo enkulu yokhetho lwezothutho ezininzi: isikhululo se-Osong KTX, iSejong-Si, isikhululo sikaloliwe saseCjeongju, isikhululo seenqwelomoya saseCheongju.
## Ihlala ilungile, ngoko ke unokuyisebenzisela ukubhukisha kade kwangolo suku olunye. Ugcino losuku olunye lunokuhlalisa ukuya kuthi ga kubantu aba-2.
1. Umthamo wendawo yokuhlala: abantu aba-3 [kusekelwe kubantu abadala]
2. (1) Izixhobo eziluncedo: i-air conditioner, indawo yokufudumeza, ingubo, ifriji, i-microwave, i-rice cooker, umatshini wokuhlamba, isicoci sempahla, indawo yokuhlamba impahla, i-IPTV, i-intanethi, i-WIFI yasimahla, imbiza yekofu, itshaja yeselula, isicoci sevacuum, indawo yokupaka
(2) Ikhitshi: imbiza, isitya, icephe, ibhodi yokusika, imela, ilaphu lokutya, into yokuhlamba izitya
(4) Ibhedi (ukumkanikazi) 1, futon & futon 1.
(6) Sinikezela ngesaphulelo sokuhlala ixesha elide.Nceda ubhekiselele kwinkcazo.
1. Amanani abantu: 3 abadala
2. Izibonelelo: I-air conditioner, i-Heating system, iibhedi, ifriji, i-Microwave, i-electric rice cooker, umatshini wokuhlamba, i-Detergent, i-Laundry Rack, i-IPTV, i-intanethi, i-WIFI, imbiza yekofu, itshaja ehambayo, indawo yokupaka.
3. Ikhitshi: Iimbiza, izitya, amacephe, iifolokhwe, ibhodi yokunqunqa, imela, ilaphu lokutya, Isepha
4. Igumbi lokuhlambela: Isixhobo esomisa iinwele, isixhobo sokulungisa iinwele, iitawuli, ishampoo, iconditioner, isepha, isicoci sobuso, ibhrashi yamazinyo, intlama yamazinyo, iwasha yomzimba, iBidet.
5. Igumbi lokulala 1, igumbi lokuphumla 1
6. Iingubo kunye nazo zonke izigqubuthelo zokulala zihlanjwa ngokucocekileyo kwaye zihlanjululwe.
7. Sinikezela ngesaphulelo esikhethekileyo sokuhlala ixesha elide.
8. Ngena : pm 4:00 ~ am 2:00
Phuma: 11:00 am
9. Ugcino lwasemva kwexesha luyafumaneka.
4.91 · Izimvo eziyi-387
1. Ukufikelela ngokugqwesileyo kwi-Intercity Bus Terminal, i-Express Bus Terminal, i-Cheongju Industrial Complex, i-Osong Station (KTX), iSikhululo sase-Cheongju, i-Cheongju IC, i-Seocheongju IC, i-Airport yase-Cheongju, kunye ne-Sejong City.
2. Kukho iindawo zokuthenga, iiholo zomtshato, iithiyetha, iivenkile ezinkulu zeencwadi, iindawo zokutyela, iiklabhu, njl.
3. Iindawo zokutyelela ziquka i-Seongan-gil, i-Yukgeori Market, i-Underground Shopping Mall, i-Sangdangsanseong Fortress, i-Suamgol, i-Museum, i-Zoo, i-Cheongnamdae, i-Daecheong Dam, i-Hyundai Department Store, kunye ne-Gwell City Mall. ^^
Umbuki zindwendwe ngu- Jiyoung
Izimvo eziyi-1 071
1. Siyayihlonipha imfihlo yeendwendwe zethu kangangoko sinakho.
2. Ukuba unemibuzo okanye iimfuno, nceda usithumelele umyalezo kwaye siya kuwusombulula ngokukhawuleza ~ ~ nanini na ~
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Heungdeok-gu, Cheongju